4.7.2019, Full time , Food & Beverages / Catering
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	LCCI Level (II) UK အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Cashier ရာထူး ဖြင့်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
•	အလုပ်ချိန် 9:30 am – 6:30 pm
•	နားရက် (တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်)
Work location No.25, Room .703, 7th Floor,Yuzuna Business Tower,Dhammazedi Road, San Chaung Township, Yangon.
200 Days, Full time , 100 000 - 150 000 Ks, Food & Beverages / Catering
•	Sport Wear အရောင်းဆိုင်တွင်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။
•	Establishes, develops and maintains business relationships with current customers. •	Expedites the resolution of customer problems and compliains •	Analyzes the territory market’s potential and determines the value of existing and prospective customers value to the organization. •	Supplies management with Oral and written report on customer needs, problems, interests, competitive activities and potential for new product and services •	Keep abreast of product technical services, market conditions, competitive activities. •	P ...
237 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Auto & Manual နှစ်မျိုးလုံးမောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တစ်ခါတစ်ရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ •	မနက် ၄ နာရီဝန်းကျင်မှစ၍ အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည်။ •	တစ်ရက်အလုပ်ချိန် (၈) နာရီ •	နေ/စား ငြိမ်းနေလိုပါက စီစဉ်ပေးမည်။
•	စကားပြောပြေပြစ်ရပါမည်။ •	တစ်ခါတစ်ရံနယ်သွားနိုင်ရပါမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ မနက် 7:00 am မှ ည 10:00 ထိ အလှည့်ကျလုပ်ကိုင်ပေးရပါမည်။ •	အလုပ်ချိန် တစ်ရက် (၈) နာရီ ဖြစ်ပြီး ၊ အလုပ်ချိန်ထက်ကျော်လွန်ပါက အချိ� ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအချိန်ပိုကိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရပါမည်။
253 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
291 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
300 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
370 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
Cashier Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Great Victory Food & Beverage Co.,Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs Cashier Jobs in Myanmar, jobs in Yangon